Faka ishishini, yenza i-LLC kulo naliphi na ilizwe
Isigqibo sokubandakanya wena okanye ishishini lakho linyathelo lokuqala ekunikezeleni ngokhuseleko olusebenzayo kuxanduva lomntu, ukuhlawula irhafu ngokugqithileyo, kunye nokubonelela usomashishini okanye umtyali mali onobuchule ngesixhobo esisebenzayo nesinamandla sokunceda kulawulo nokukhulisa amashishini abo. Zininzi izizathu zokubandakanya; ngokudibanisa, uyila into eyahlukileyo, eyahlukileyo esemthethweni enokusetyenziselwa ukukhusela ubutyebi bakho kunye nezinto onazo ngokwahlulahlula, buqu, kwityala leshishini, amatyala, abatyalwayo kunye nerhafu egqithileyo.
Iinkampani eziHlanganisiweyo zizinikele ekunikezeleni kubabukeli bethu lolona lwazi lubalulekileyo lokubandakanya ishishini lakho. Sipapashe ifayile ye- Isikhokelo sokudibanisa ishishini lakho.
Ngokwenza iQumrhu okanye i-LLC, wenza "umntu" owahlukileyo, umbutho osemthethweni onokuba ngumnini wepropathi, ahlawule irhafu, angene kwizivumelwano kwaye enze ingeniso eyahlukileyo kweyakho. Umbutho ungamangalela kwaye ubekw 'ityala ngokwawo, ngaloo ndlela ukhusela iiasethi zabanini zabelo. Oku kwahlulwa kunye nokukhuselwa kweeasethi kunye nepropathi kwaziwa ngokuba "luxanduva olulinganiselweyo." Ezinye izibonelelo zibandakanya ukuqhubekeka kweshishini, njengoko ishishini lingachaphazeleki kukutshintsha kwabanini zabelo ngenxa yokusweleka, ukuhanjiswa kwezabelo, ukuthengiswa, ukufunyanwa, njl.
Olunye uncedo oluphambili kukuba abathengisi abanokubakho, ababolekisi, amaqabane kunye nabatyali mali kwishishini lakho banxulumana ne "inc." emva kwegama lenkampani yakho njengophawu lokuba bajongene nenkampani esebenzayo kwaye eqhuba ngokufanelekileyo. Ngapha koko, abatyali mali abanobuqili bayakuqonda ukhuseleko olwandisiweyo kwityala lomntu kunye nerhafu engafanelekanga ebonelelwa lishishini.
Iinkampani eziHlanganisiweyo zibonelela nge- NGOKUKHAWULEZA kwaye KULULA Indlela yokubandakanya ishishini lakho!
Iiphakheji ezi-3 zokukhetha kuzo
Amaxwebhu akho ayiliwe NGALO SUKU
Iifom zerhafu ezibandakanyiweyo
Imithetho kaMasipala neziVumelwano ezibandakanyiweyo
Izixhobo zeNkampani kunye neziXhobo
Iinkonzo ezingakumbi zoKwakha amaShishini
Ukuphuculwa kwenkonzo yeephakeji kuza kunye fREE Iinkonzo zeArhente ezibhalisiweyo kunyaka wokuqala! Tsalela umnxeba ngoku ukonga okongeziweyo.
1-661-310-2688 - kumazwe aphesheya
Nje ukuba isigqibo sokubandakanya sithathiwe, uyakufumanisa ukuba ukubandakanya urhulumente wakho kunokuba yinkqubo elula kakhulu: iiphakheji zethu ezifanelekileyo zibonelela ngoncedo olukhawulezayo, olunobuhlobo nolusebenzayo. Kukho amanqanaba amathathu ahlukeneyo onokukhetha kuwo, kuxhomekeka ekubeni ungathanda ukulifaka njani ishishini lakho. Sithatha yonke intloko ebuhlungu kwaye sikhathazekile kwinkqubo yokufakwa.
Ukwenza ishishini kunye nokuthatha isigqibo malunga nolwakheko okanye uhlobo kunokuba yinkqubo eyoyikisayo, enzima. Sinceda ukuyenza lula le nkqubo ngokubonelela ngenkcazo ebanzi yeentlobo ezahlukeneyo zamashishini, kwaye kukuvumela ukuba uzithelekise macala onke. Ngale ndlela, unokuqiniseka ukuba ukhetha uhlobo olusebenzela wena kunye neenjongo zakho.
Ukukhetha ulawulo, okanye ilizwe, ukufaka ishishini lakho sesinye isigqibo oya kujongana naso. Sibonelele ngolwazi olubanzi kuhlobo ngalunye lobume beshishini lwe ilizwe ngalinye, kubandakanya iindleko ngqo kunye nemirhumo yokufayilisha kurhulumente, kwilizwe liphela.
IinkampaniInc.com zibonelela ngoluhlu olupheleleyo lweenkonzo zokuNgenisa, ukusuka kwiifilitha zokuqala, kwiinketho ezahlukeneyo kunye neenkonzo ezinokuphucula imeko yequmrhu lakho. Olu lonyulo luqhutywa ziimfuno zakho kwaye nento osixelela ukuba uyayifuna kwaye uyilindele, kwaye siyilungelelanisile ipakethe yakho kwiimfuno zakho – ilula ngenene! Sikugcina kwilogo yonke inyathelo lendlela, ngezaziso ezikwimo nganye kuwo onke amanqaku abalulekileyo enkqubo yokufakwa kwi-Intanethi.
IinkampaniInc.com kukufaka okukhokelayo kunye nomboneleli wenkonzo yamaxwebhu, kwaye besikwindawo ephambili ebaleni amashumi eminyaka. Uhlobo lweeNkampani eziHlanganisiweyo yinkonzo yeeNkonzo eziHlanganisiweyo zeNkampani, esekwe ngo-1906. Injongo yethu kukuqinisekisa ukuba bonke abathengi bafumana izibonelelo kobo butyebi bamava. Iinkqubo zethu zobunini kwaye "yazi njani" zisivumele ukuba sibandakanye ngempumelelo amawaka eshishini elifana nelakho. Faka kunye nenkampani ulinganise # 1 kwinkonzo yabathengi kwicandelo lethu! Sitsalele umnxeba namhlanje, okanye usebenzise iwebsite yethu elungele umsebenzisi ukuba uqalise ukufakwa kwi-Intanethi namhlanje! Yiza amava abathengi bethu sele besazi!
Ndingadibanisa ngaphandle kweGqwetha?
Ewe unako – oku kukhethekileyo. Senza uxinzelelo oluntsonkothileyo lolwimi olukhethekileyo kunye namaxwebhu asemthethweni ukuba kube lula kwaye ulawuleke. Sikwenza ukuba kube lula kwaye kube lula kubathengi bethu ukuba bafunde kwaye baqonde "ulwimi lwendibaniselwano" kunye namagama awodwa afakelwayo kumanqaku okufakwa, imithetho kamasipala, imizuzu yemibutho, njl., Ukuze ukwazi ukugxila ekukhuliseni ishishini lakho ngelixa imeko yakho efakiweyo ikhusela iiasethi zakho kwityala loluntu, irhafu engafanelekanga, kunye nokubonelela ngezinye izibonelelo ezifanelekileyo zeshishini. Iiphakheji zethu zokuNgenisa ngokupheleleyo zibonelela ngamanqaku alungiselelwe ngokufanelekileyo, imithetho kamasipala, kunye nolwimi lwemizuzu oyisebenzisayo! Ngokwenene siyinkampani yeNkonzo ePheleleyo!
I-149 yeNtlawulo yokuQulunqa okanye ukuGcwalisa iMali yePakethe yokuNgenisa
Imirhumo yokuFayilisha kaRhulumente
Imirhumo kaRhulumente yoNyaka (ezi zihlala zivela kwi- $ 25 ukuya kwi- $ 125 ngonyaka)
Intlawulo eyi-189 yeArhente ebhalisiweyo yonyaka
Iinkampani zibandakanya iifayile zamaxwebhu kwilizwe liphela nazo zonke iiofisi zamasebe zikaRhulumente. Sineeofisi zethu eCarlifonia eziya kuzisa ngesandla amaxwebhu kuNobhala wokwenza ikhawuntara. Thenga i iqonga leShelf California okanye naliphi na ilizwe ngokukhawuleza nangokulula.
Igqityelwe ukuvuselelwa ngoJuni 5, 2021